सिंहदरबारको सिंहासनबाट हुत्तिएर हामी यहाँ छौं …? – कामना डेली
On २०७७ पुष २५, शनिबार ०९:०९
यहाँ केही यस्ता तथ्य र दृष्टान्तहरूको बारेमा स्मरण मात्रै गराउन खोजिएको छ, जो पार्टी विग्रह र विभाजनअघि योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए । यसको पृष्ठभूमिका केही सन्दर्भ र घटनाक्रमहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय भएको छ ः
२. यसरी जोडजाम गरी बनाइदिएको ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ले जारी गरेको विज्ञप्ति झन् अनौंठो थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा रहेको ‘…केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको…’ भन्ने टिप्पणी अशिष्ट, पूर्वाग्रही र अत्यन्त दुराशयपूर्ण एवं खेदजनक नै थियो । उक्त विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै मैले २७ साउनमा जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको थिएँ ः
सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा बहस गर्न नसक्ने निरूपाय व्यक्तिहरू नै आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्न नपाउँदा अाँंखा चिम्लेर अँध्यारो देख्छन् र उज्यालोको भत्र्सनामा जुट्छन् ।
९. २०७७ साल असार १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६९औं मदन जयन्तीका अवसरमा भन्नुभएको थियो ः ‘पहिलेको कुरा पनि यहाँहरूलाई सम्झना नै होला । चीनतिर ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि मेरो सरकार ढलेको थियो । किनभने हामीसँग बहुमत थिएन । अहिले पनि त्यही सपना देखेर केही तत्वहरू हिँडेका छन् । अहिले संविधान संशोधन भयो र नक्सा जारी भयो । यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब छाड्नुहुन्न भनेर भित्रभित्रै कुरा गर्छन् । बाहिरबाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्रै यस्तो अपराध गर्नेलाई देखिएकै छ, चिनिएकै छ भन्ने गरेका छन् । दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरू सुन्नोस् । त्यसले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ ? यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरूले पनि बताइराखेका छन् । एम्बेसीको सक्रियताले बताइराखेको छ ।
१०. भानु जयन्तीका अवसरमा २०७७ असार २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बौद्धिक बहस र विमर्शको क्रममा भन्नुभएको थियो ः ‘हामी अहिले पनि सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौं भनेर ठानिराखेका छौं । खासमा भारतका होइन, अयोध्याका राजकुमारलाई दिएका थियौं । अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा पश्चिमपट्टिको गाउँ हो, खडा गरिएको अयोध्या होइन । अयोध्याको बारेमा हाम्रोमा विवाद नै गर्नुपर्दैन । जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या बीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा यहाँ, बाल्मिकी आश्रम चितवनमा यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टी यज्ञ लगाउने रिडीका पण्डित श्रृङ्ग ऋषि त्यहाँ रहेको तथ्य जगजाहेर छ । उनी पछि गएर त्यहीँ माथि डाँडामा बस्न गए र अहिले पनि त्यहाँ श्रृङ्गा भन्ने ठाउँ छ । पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी नेपालकै हुन् । त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइनन्, ठाउँ पनि भारतमा होइन । त्यो ठाउँ पनि नेपालकै हो । पढाउने गुरुको बाल्मिकी आश्रम यहीँ छ । समयसमयमा आएर शिक्षादीक्षा ज्ञानगुन दिने वाल्मिकी आश्रम यहाँ छ र जनकपुर यहीँ छ । यहाँको जनकपुर र त्यहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ ? त्यस बेलाको जमानामा न टेलिफोन, न मोबाइल, कताबाट थाहा होस् ? थाहा हुन पनि सम्भव थिएन । नजिकै पर्दथ्यो र त सजिलैसँग गए पनि हुन्थ्यो र बिहेवारी भयो । तर, यो इतिहासको बहस गरिसाध्य छैन । मैले यति भनेपछि फेरि विद्वान्हरूको एक हमला ममाथि हुन्छ । अयोध्या अहिले पनि छँदैछ र घर–माइती गर्न त्यति छिटोछिटो भारतको अयोध्याबाट त संभव हुन सक्दैनथ्यो । यहाँ वीरगन्जको छेउमा भएको हुनाले त्यहाँबाट जनकपुर जान–आउन सजिलो थियो । त्यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम पुग्न सजिलो थियो । पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मीकि आश्रममा त्यत्रो दिन लगाएर छाडेको पनि होइन । तलतिर लगेर जंगलमा यसो छाडेका हुन्, जो दुई दिन वा चार दिनमा सम्भव हुन्थ्यो । अयोध्या जान त महिनौं पो लाग्छ ? लक्ष्मण त्यसरी महिनौं हराएका होइनन् ……..
११. निजी क्षेत्रको एक टेलिभिजनलाई प्रधानमन्त्रीका हामी सल्लाहकारहरूको कोभिड–१९ को परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोमा समेत असैह्य पीडाबोध र छटपटी भयो । त्यसले एकतर्फी एवं मनगढन्ते रिपोर्टिङ गरेर हामीलाई बदनाम गर्न खोजेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । जबकि हामी सल्लाहकारहरू ‘आइसोलेसन’मा बस्दासमेत पटकपटक सम्पर्क गर्ने, हामीसँगै सूचना र जानकारी लिन सक्रिय त्यसै टेलिभिजनका अरू व्यावसायिक सञ्चारकर्मीहरू स्वयंले त्यस्ता नकारात्मक, निहीत उद्देश्य र स्वार्थ प्रेरित बदनाम प्रपञ्चलाई के ठाने होलान् ? ‘बालुवाटार सुनसान भयो…’ भन्नेजस्ता रिपोर्टिङ प्रसारण गर्ने, दैनिक १० पटकभन्दा बढी एकै व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुपर्ने हामीसँगै, अनि संक्रमणका कारण दैनन्दिन नियमित काममा असर परेको सबैको धारणा, लक्षणहरू केही नदेखिएको हाम्रो स्थिति, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ सबै संक्रमितहरूलाई केन्द्रित गरेर हुने तथ्य र आइसोलेसनमा सात दिन पुगेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डअनुरूप नियमित प्रक्रियामा नै परीक्षण गराउँदा ‘नेगेटिभ रिपोर्ट’ आएपछि त्यसरी दुनियाँलाई दिग्भ्रमित पार्न खोज्नु खेदजनक थियो ।